Site na: KongoLisolona: November 30, 2019 00: 30 Enweghị asịsa
N'ihi ya, ndị isi ojii / ndị Africa nyefere ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndi ozuzu aturu na ndị isi rụrụ arụ na-ada n'oge ọ bụla. "Onye ara na-ekwughachi otu ihe ugboro abụọ ma na-atụ anya nsonaazụ dị iche."
Ndi be m dikwa obi ojoo? Anyị dị mma karịa nke ahụ. Reallychọrọ n'ezie nnwere onwe ma ọ bụ nnwere onwe na ntinye ??
Rimụ nwanyị abụọ ahụ na-ezukọ n'otu oge n'ụlọ ọgwụ ileta di ha: ọ bụ ihe dị mma na ụmụ nwanyị abụọ na-alụ ọgụ n'ihi nwoke? N’agbata nwoke a na ndi nwanyi abuo ndi (ma obu ndi nzuzu) ?? … (VIDEO)
Ọkt20 02: 15